We She Me: ယောက်ျားလေးတွေ ဘာကြိုက်
| FLAGS: Me , she
Ma Yangon Thu - 8/8/07, 12:58 AM
ဂလိုလား.. ယောင်္ကျားလေးတွေ အကြိုက်ကလည်း များလိုက်တာနော်.. Andy သူငယ်ချင်းတွေရော သူတို့ အကြိုက် ကိုက်ညီတာနဲ့ ရကြလားဟင်.. စပ်စုတာ.. :P
imaginary clouds no2 - 8/8/07, 1:15 AM
Myo Kyaw Htun - 8/8/07, 11:59 AM
မေးမယ်လုပ်ကာပါမှ ... အသေသတ်သာ သတ်လိုက်ဆိုလို့ မမေးတော့ပါဘူး :P
Tun Myo Hlaing - 8/8/07, 12:23 PM
The third paragraph is good :P lol.
Andy Myint - 8/8/07, 3:52 PM
မရန်ကုန်သူ... မိန်းကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် များတယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး... ယောက်ျားလေးတွေက တစ်ယောက်မှာမှ တစ်မျိုးလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ တချို့တွေလည်း အပိုင် ရကြပါတယ်။ တချို့တွေလည်း ခဏ ရကြပါတယ်။ တချို့တွေလည်း ကံမကောင်းပါဘူး။
တိန်တိန်ရယ်.. တို့မှာ ပိုင်ရှင် ရှိနေပါပြီ.. အဟွန့်.. အဟင့်။ (Blog က ပြန်ပြောတာ)
မျိုးကျော်ထွန်းရဲ့ အကြိုက်ကလေးလည်း သိပါရစေ.. ဟဲဟဲ။
TMH... Really? That wasastrategy... ha ha.. :P
Anonymous - 8/9/07, 12:37 AM
ကိုအန်ဒီရေ.. အရေးကောင်းလိုက်တာ ။ ဖတ်ပြီး ရီနေတယ် အဟား.. ။ ကိုအန်ဒီ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အမျိုးမျိုးပါလား ။ သူတို့ရွေးချက်တွေကတော့ စံပါပဲကွယ်လို့ ပြောရမလို့ ဖြစ်နေပါပြီရှင်း)
ဒီစလုံးမှာ ပြောလေ့ရှိတာတော့.. ယောက်ျားလေးဆိုရင် find someone who will peel prawns for you တဲ့ ။ နောက်.. အလုပ်က လူတချို့ကိုမေးကြည့်တော့လည်း အောင်မလေး.. မခွာပေးနိုင်ပါဘူး ၊ ဒီလောက် အလုပ်ရှုပ်တာတဲ့ (အဲလိုပြောတဲ့သူတွေက romantic မဖြစ်တဲ့သူတွေ သိလား အဟီး)
အဟဲ.. ဒါကြောင့် ခုထိ ဂျစ်တူး ရွေးမယ်ဆိုရင် ၊ ညစာခေါ်စားပြီး ပုဇွန်ဟင်း မှာစားပါတယ် ။
Andy Myint - 8/9/07, 1:12 PM
ဂျစ်တူးတို့က အဲဂလိုလား... ပိုင်ပါပေ့။
ပုဇွန်ကို ဒီအတိုင်း မကျက်တကျက် လှော်ထား ပြုတ်ထားတာကို ပြောတာလား။ Buffet စားရင်တော့ အဲဒါမျိုး များများ စားတယ်။
အကျက်တောင် မခွာပေးချင်ရင် အစိမ်းများ ကိုင်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ မသိဘူး။ Oh.. Nasty ဆိုပြီးများ ပြောမယ်ထင်တယ်။
အကြံထပ်ပေးလိုက်မယ် ညစာစားလို့ ပုဇွန်ခွာပေးတဲ့ သူနဲ့များတွေ့ခဲ့ရင် အိမ်ကို ထမင်းချက်စားကြမယ်ခေါ်ပြီး ပုဇွန်အစိမ်းပါ ခွာခိုင်းချေ။ ဒါဆိုရင်တော့ Double Confirmed ပဲ... ဟဲဟဲ။
ko tian - 8/9/07, 2:44 PM
သားကတော့ အကောင်လိုက် ၀ါးစား လိုက်တာပဲ (ပုဇွန်) ;D
Anonymous - 8/9/07, 4:51 PM
ဒီလိုလေ ကိုအန်ဒီ.. ဒီမှာ ပုဇွန်ဆိုရင် ခေါင်းခွာထားရင်တောင် ၊ ကိုယ်လုံးနဲ့ အမှီးမှာ မခွာထားဘူး ။ အဲဒီဟာမျိုး.. အများအားဖြင့်တော့ ညီမ စားတာ အကျက်ကြော်ထားတဲ့ဟာတွေ ၊ နောက် steam လိုမျိုး လုပ်ထားတာ (seafood buffet တွေမှာ ရှိတယ်) စားတယ်..
နောက် drunken prawn ရှိတယ်လေ.. အဲဒါဆို ပိုဆိုး.. ဘာမှမခွာထားဘူး ။ အဲလိုဟာ မှာစားတယ် အဟဲ ။
အဟီ အကိုအန်ဒီပြောတဲ့ အိမ်ခေါ်နည်းတော့ မလုပ်ဖူးသေးဘူး ။ thanks for the tip :)
Ko Tian.. ရေးထားတာ ရီရတယ် ။ အကောင်လိုက် ၀ါးစားတယ်တဲ့ ။ အခွံတွေက အခန့်မသင့်ရင် ဆူးတတ်တယ်နော် သတိထားး)
pandora - 8/9/07, 5:25 PM
ဒင်းတို့က ဒီလိုရွေးသကိုး အခုတော့သိပြီ သို့သော်လည်း နောက်ကျခဲ့ပြီ.
Andy Myint - 8/9/07, 7:23 PM
အင်း.. မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေ အကြောင်းကို ယောက်ျားလေးတွေက သိတာထက် အများကြီး ပိုသိပါတယ်။
SuN - 8/13/07, 7:17 PM
I've asked some of my guy friends the same question. The answers are funny and vary too.
Andy Myint - 8/13/07, 7:38 PM
Yeah... it’s fortunate that likes vary… there would be war otherwise... :-P
Layma - 8/27/07, 11:10 PM
အာခီကဆိုရင်တော့ အနုပညာလက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့..လေးမရဲ့ လက်ချောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မိတယ် …
ကိုမင်းကျော် - 8/31/07, 5:53 PM
ဟိုက်..... ဒီမှာက ပုဇွန်က အားလုံးခွာပြီးသား၊ အမြှီးကလွဲရင်ပေါ့၊ အမြှီးက ကိုင်ပြီး စားရုံဘဲလေ .... ဒါဆိုရင် ....?
Anonymous - 2/17/10, 3:09 AM
thanks for your this post..
စုစု - 9/25/12, 8:01 PM
အစ်မ အတွက်က တော့ အစ်ကို.စံနဲ.ကိုက်သွားတယ်နော်။ သမီးလေးကိုလည်း ကောင်းကောင်း ပြုစုပါအုံး။ သူကကြိုက်နေပါရဲ.နဲ. ဟိုဘက်က စံထဲပါသွားမှဖြင့်... အဟင့် အဟင့်။
တို.များလည်း ဘယ်စံထဲများ အထဲ့ခံခဲ့ရလည်းမသိ။